Miahy ny vehivavy ny filohan'ny holafitry ny fizahantany afrikanina Cuthbert Ncube
Home » Lahatsoratra farany farany » Podcasts » Miahy ny vehivavy ny filohan'ny holafitry ny fizahantany afrikanina Cuthbert Ncube
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao • People • Podcasts • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Septambra 2, 2020
Filohan'ny ATB Andriamatoa Cuthbert Ncube ao amin'ny Tetikasa momba ny fizahantany any Afrika izay manantena
Birao fizahantany afrikanina Cmpanao volo Cuthbert Ncube dia manolotra ny andraikiny amin'ny andraikitry ny vehivavy any Afrika, ary indrindra amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany afrikanina.
Izany dia noraketina an-tsoratra nandritra ny Webinarin'ny Sector Value Chain Webinarin'ny ATB ny Alatsinainy 31 Aogositra.
Cuthbert Ncube no filoha ankehitriny an'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany. Izy no filoha lefitra isam-paritra an'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO) ary ny talen'ny Executive Executive an'ny Kwela Fleet Management, South Africa ary Golden Feathers Lodge any Cape Town. 20 taona mahery ny traikefany amin'ny fitarihana orinasa sy ny fampandrosoana orinasa, ao anatin'izany ny andraikiny amin'ny maha filoha lefitry ny UNWTO azy.
Tamin'ny taona 2013, Kwela Fleet Management dia nekena ho mpikambana afiliana ao amin'ny United Nations World Tourism Organisation izay sampan'ny Firenena Mikambana. Tamin'io taona 2013 io ihany nandritra ny fivorian'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany eran-tany ao Zambia dia voafidy ho filoha lefitra isam-paritra Andriamatoa Firenena mikambana misahana ny fizahan-tany - Afrika ary Andriamatoa Ncube ary mpikambana ao amin'ny birao ihany koa. Voafidy indray izy tamin'ny volana septambra 2015 tao amin'ny fivorian'ny Plenary fivorian'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany eran-tany ao Madeline Columbia, 2017 nahita azy voafidy indray tany Londres nandritra ny fotoam-piasana faha-3.
Ny sehatry ny fahaiza-manaon'i Cuthbert dia misy ny fitantanana stratejika, fampandrosoana ny fandraharahana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitondrana fiaraha-miasa ary serivisy ho an'ny mpanjifa. Manana tombon-tsoa hafa amin'ny sehatry ny fizahan-tany koa izy, anisan'izany ny fanaovan-gazety sy ny fitantanana ny marika.
Talohan'ny nidirany tao amin'ny asany ankehitriny, Cuthbert dia nitazona ny fiarahany miasa amin'ireo mpilalao lehibe rehetra ao amin'ny Africa Tourism Industry, ao anatin'izany ny Cape Town Tourism, ny Chambre du Commerce sy ny Indostria Durban, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany any Afrika, ary ny RETOSA. Izy koa dia miara-miasa amin'ireo manam-pahaizana momba ny fizahantany afrikanina hafa mba hamoronana tombony ho an'ny Afrikanina, indrindra ny fizahantany, fitsangatsanganana ary fandraisana vahiny. Miasa amin'ny birao marobe izy izao.
Kwela Fleet Management dia naorina tany Pretoria tamin'ny 1996 izay manome serivisy manerana ny faritany lehibe sy ny tanàna any Afrika atsimo, ao anatin'izany ny Cape Atsinanana, Western Cape, KwaZulu-Natal, ary Gauteng, ary manana ny toerany amin'ny varotra Lisbony ho Kwela Europa. Izy io dia manana ekipa fitantanana efa za-draharaha sy manana fanoloran-tena. Anisan'ireo mpanjifan'ny orinasa ireo sampandraharaham-panjakana, masoivoho, orinasam-pitantanana fitsangatsanganana ary tsy miankina.